မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားထားတဲ့အဆောက်အအုံကို အဓိကထား ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ - JAPO Japanese News
မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားထားတဲ့အဆောက်အအုံကို အဓိကထား ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ
သော 03 Sep 2021, 12:29 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းလာပြီး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများပြားလာခြင်း၊ Nuclear Family တိုးပွားလာခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အထီးကျန်စွာ သေဆုံးမှုဟာ တိုးပွားလာလျက်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုရိုနာသက်ရောက်မှုကြောင့် မိမိကိုယ့်ကိုသတ်သေတဲ့အမှုလည်း တိုးပွားလာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက်လူသတ်တဲ့အမှုလည်း တိုးပွားနေပြီး နေအိမ်မှာ အလောင်းကို ပစ်ထားခဲ့တာတို့လည်း များပြားလာလျက်ရှိပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ရော ဒီလိုအမှုတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေအိမ် တစ်နည်းအားဖြင့် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားထားတဲ့အဆောက်အအုံမှာ နေချင်ပါသလား။
သရဲတွေ့ချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့သူတွေကလွဲပြီး လူအများစုက မနေချင်ကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ဒါဆို အိမ်ရောင်းတဲ့အချိန် ဒီလိုမတော်တဆမှုတွေဖြစ်ထားတယ်ဆိုတာကို မပြောဘဲနေရင် ရတာပဲလို့ထင်ရပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်အသားရှိပြီး ဒါကို ဖုံးကွယ်ကာ ရောင်းချတာတို့၊ ငှားရမ်းတာတို့လုပ်ရင် ဥပဒေဖောက်ဖျက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ယန်း ၁ သိန်းနဲ့ငှားနေကြအိမ်ဟာ ယန်း ၅ သောင်းနဲ့တောင် ငှားမယ့်သူမရှိတာတို့၊ ယန်း သိန်း ၃၀၀ နဲ့ရောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်သူမှမဝယ်တာတို့ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားထားတဲ့အဆောက်အအုံကြောင့် မငှားရမ်း၊ မရောင်းချနိုင်ဘဲ အဆင်မပြေဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့် MARK’S Inc. ကတော့ ဒီလိုမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားထားတဲ့အဆောက်အအုံကို အဓိကထားဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။
Seibutsu Real Estate ဆိုတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်း ထောင်ထားပါတယ်။
လူသေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် အမျှဝေသလိုမျိုးလုပ်ပြီး ဒီလောကနဲ့ တွယ်တာမှုကို မရှိအောင်လုပ်ကာ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်စေတာကို အကျွတ်တရားရစေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့သူကို မစွဲလမ်းအောင်၊ ကျွတ်လွတ်အောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆောက်အအုံမှာ ဒီလိုအခြေအနေကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။
・၇၂ နာရီကျော်မှ တွေ့ရှိလိုက်တဲ့ တစ်ဦးတည်းလူမသိသူမသိသေဆုံးထားတဲ့အိမ်
・မျှဝေအသုံးပြုသည့်နေရာနှင့် အခြားအခန်းတို့တွင် အမှု၊ မတော်တဆမှုများဖြစ်ထားသောအိမ်
အတော်လေး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ သော့ချက်စကားလုံးတွေကို ရေးထားတာပဲနော်။
ဒါ့အပြင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ဝန်ထမ်းတွေလုပ်ရတဲ့အရာတွေကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
ပထမဆုံး Harae ကနေ စလုပ်ပါမယ်(ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့လုပ်သည့်နတ်ကွန်းပူဇော်ပွဲ)
အိမ်ကို မရောင်းခင် ဒါမှမဟုတ် မငှားခင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက Harae ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ နတ်ကျောင်းတွေမှာ သေချာ Harae ကို လုပ်ရပါတယ်။
အဆောက်အအုံသာမက ဝန်ထမ်းအားလုံးလည်း ၂ လတစ်ကြိမ် သေချာစွာ Harae ကို လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။
သေဆုံးပြီး ပစ်ထားခံခဲ့ရတဲ့အခါ ပုပ်ပြီး အနံ့အသက်က အတော်လေးပြင်းပါတယ်။
ဒီအနံ့ကို ဘယ်လောက်ထိ ပျောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
ပုပ်ပွလာတာနဲ့အတူ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အရည်တွေ ထွက်လာပြီး ကြမ်းပြင်ထဲကို စိမ့်ဝင်ကာ အောက်ထိရောက်နေတာလည်း ရှိပါတယ်။
အထူးသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကို အလုပ်အပ်နှံတာတွေရှိပေမယ့် အနံ့အသက်ကိုပဲ ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ အနံ့ပြန်မကောင်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက် အနံ့ထွက်ရတဲ့အရင်းအမြစ်ကို လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရပါမယ်။
တာဝန်ယူမှုရှိစွာနဲ့ ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကလည်း သန့်ရှင်းရေးမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြပုံရပါတယ်။
သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် ဘယ်သူမှမဝင်ရောက်ရသေးတဲ့နေရာဆိုရင် အနံ့အရင်းအမြစ်က သေဆုံးထားတဲ့နေရာကနေ အခြားနေရာကို မရွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပေမယ့်
ရဲအလုပ်စတာတွေနဲ့ အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့သူရှိရင် လုပ်ရကိုင်ရခက်ကြရပါတယ်။
အခန်းထဲကို ပတ်ကြည့်ရတာလည်း ရဲအလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန် ဖိနပ်နဲ့ အကျိအချွဲ၊ သွေးစတာတွေကို နင်းမိပြီး အဲ့ဒါနဲ့ အခန်းတစ်ပတ်လျှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒါကလည်း အနံ့ဆိုးတွေဖြစ်စေပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနံ့စိမ့်ဝင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် နံရံကပ်စက္ကူတွေသာမက အဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ plasterboard တွေကိုလည်း ခွာရမှာဖြစ်ပြီး နံရံ၊ မျက်နှာကျက်၊ ကြမ်းပြင်တွေကိုလည်း အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရတဲ့အဆောက်အအုံတွေ အများကြီးရှိပုံရပါတယ်။
ဒါတွေကို လုပ်ရမလုပ်ရဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေက အခင်းဖြစ်ရာအဆောက်အအုံကို သွားကြည့်ရပါတယ်။
မွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းလာပြီး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများပြားလာခြင်းနဲ့ဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီလိုမျိုးအဆောက်အအုံတွေ ပိုမိုများပြားလာဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်း မနေဖြစ်တဲ့အိမ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးလာမျိုးက မဖြစ်သင့်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုမျိုး သေချာလေးပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ကတော့ နည်းနည်းကြောက်တတ်လို့ အဆင်မပြေပေမယ့် တိုကျိုမြို့ထဲမှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ နေချင်တဲ့သူများ ဒီလိုအဆောက်အအုံကို စဥ်းစားကြည့်ရင်ရော ဘယ်လိုပါလဲ?
“အနံ့အသက်မကောင်းတဲ့ထမင်း” လို့ ပြောကြတဲ့ ထောင်ထမင်းက တကယ်ဘဲ ဆိုးရွားတာလား?
ဂျပန်ရဲ့အလေးအနက်ထားမှုက ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတယ်။ Moonshot အစိုးရစီမံကိန်းတစ်ခု !!